Kungakanani ukuvula i-disensary noma ukukhula? Umhlahlandlela we-cannabis wokuqalisa izindleko.
Ummeli waseFlorida Cannabis
I-Illinois cannabis zoning & ukuhlelwa kokusetshenziswa komhlaba
Izindleko Zokuvula Izinkinga Zokukhula Nokubumba
Yenza ngokomthetho insangu ngokomthetho wesikhundla
Ukusetshenziswa Komphakathi kweCannabis
Ukuthenga imbewu ye-cannabis online Ngokomthetho
Umthetho OWENGEZIWE (UMthetho we-Marijuana Ukubuyiselwa kanye Nokuchithwa) kuCongress
Imbewu ukuthengiswa kweCannabis Ukuhambisana Nemfuno Zommeli ePeoria
Izindaba ze-Canannis Legalization
I-Medical Marijuana neVets PTSD
Izindleko Zokuvula Ibhizinisi LwamaCannabis
Thola Bheka Manje
Yiziphi izindleko zokuvula ibhizinisi le-cannabis e-Illinois?
i-Illinois cannabis dispensary ibiza u- $ 500,000 kuya ku- $ 1,000,000 ukuvula.
Malini ukuvula i-dispensary?
Ukuvula a Isikhalazo seCannabis e-Illinois kuzobiza kakhulu ngenxa yezindleko zokuphepha, izidingo zamakhulu wemali, amalayisense, izindleko zokubonisana nezomthetho, okuqhubeka konke ekusebenzeni kwenkampani yakho. Zilungiselele futhi wenze iqembu elihle necebo lebhizinisi futhi uthole abeluleki nemithombo efanelekile yempumelelo yakho. Ochwepheshe esikhulume nabo bakholelwa ukuthi izindleko zokuvula ibhizinisi lakho le-cannabis e-Illinois zizoba phakathi kwama- $ 400,000 kuya ku- $ 1,000,000 nge-dispensary - kanye ne- $ 1.5 million kuya ku- $ 3.0 wezigidi zezinto zobuciko ezikhulayo, ngokuya ngendawo nosayizi wokwakha. Yonke imibuso ihluke kakhulu, kepha uma ufuna ukuvula i-dispensary noma ukhule e-Illinois, imithethonqubo nenombolo elilinganiselwe yamalayisense abiza izindleko kakhulu kunase West Coast.
ukuthi ungaqala kanjani ibhizinisi le-cannabis
Nakhu Isifinyezo esifushane sokuqalisa Izindleko zokuvula i-cannabis dispensary, noma umsebenzi wezandla ukhula e-Illinois:
Izimali Zokusebenza Okusemthethweni
Izindleko Zokuhlanganiswa Kwesicelo
Izimali Zokukhokhela Abasebenza Ngezimali zeCannabis
Imali Yezimali Ebanjwa Ngezimali kanye Nezinye Izimali Zobungcweti
Izindleko Zomphakathi Zokufinyelela
Izidingo Eziyinhlanganisela Zanele
Izakhiwo Zokwakha izindlu nezindleko eziqashiwe
Izindleko Zembali Yomkhiqizo
Izimali Zokuvuselelwa Kwelayisense
Intela (IRC 280E)
Imali Eqhubekayo Esebenzayo
Izindleko Zokuvula I-Cannabis Business Chazwa
Imali yelayisense ye-cannabis dispensary yakho noma i-Craft grow
Lezi ziqonde kakhulu kuzo zonke izindleko zakho - imali oyikhokhela esifundeni sase-Illinois. Banikezwa ngesibalo futhi banenombolo eyodwa. Kufa kulula ukuxhumeka kwisabelomali sakho, kepha lokho kumane kungukufakwaza-kumanzi kwamabhizinisi akho we-cannabis izindleko zokuvula i-dispensary noma umsebenzi wezandla wakhe.
$ 5,000 Imali yokufaka engabuyiswa.
Imali yokubhalisa engu- $ 60,000 (ivuselelwa ngenani elifanayo njalo eminyakeni emibili.)
Imali yokubhalisa engu- $ 40,000 (iba imali yokuvuselelwa)
Indawo Yakho Ye-Disannens Dispensary noma i-Craft grow
Ukuthengiswa kwezindlu konke kumayelana nendawo, lapho uvula khona izindaba zebhizinisi le-cannabis. Intela, njengoba ibhizinisi le-cannabis alikwazi ukubhange imali ebanjiswayo indawo ethengiswayo, ingumshayeli ophambili wento enkulu yesabelomali sebhizinisi lakho le-cannabis.
Ukubonakaliswa kwesikwele sakho kuzothinta intela yakho ephindwe kabili ngaphansi kwe-IRC 280E, kanye nezindleko zakho zokuqasha. Ngenkathi abatshali bengagugi ne-IRC 280E, badinga ukwakha amabhilidi ngaphakathi ezakhiweni zezinhlelo ezivaliwe zamaloop uma bafuna ukugcina umkhiqizo osezingeni eliphakeme kakhulu.
Udinga ukufaka isabelomali futhi ucabange ibhizinisi lakho le-cannabis ngokunembe kakhulu, ngosizo lwabaqambi abanekhono nabakhi bezakhiwo, ukunquma hhayi izidingo zakho zokuqalisa kuphela, kepha nezindleko zakho zansuku zonke.
Malini ukuvula i-dispensary
Lindela iprimiyamu emakethe yokuqasha kanye nezinkinga zokukhawulelwa kwemikhawulo. Ngenhlanhla, izinkampani ezise-Illinois zinezinyanga eziyisithupha ziklonyelisiwe selayisense lokusebenzisa kwazo okunemibandela yokuhlinzeka izwe ikheli lazo.
Ngaphezu kwalokho, izingqinamba zokuphepha eziphathelene nendawo yendawo yakho yangempela kufanele ihlolwe futhi kukhulunywe ngakho kuhlelo lwakho lokusebenza ngoba ukuphepha kungamaphuzu amakhulu ngaphansi kokuthola amaphuzu. Ngakho-ke izici zokwakha nezokuphepha ziyadingeka ukuze zihlanganiswe ekunikezelweni kwemali noma ebhizinisini lakho lokukhulisa izikebhe, elingaxineki kangako ezifundeni zasogwini olusentshonalanga. Izindleko zefenisha, izinto zokwakha kanye namathuluzi (i-FF & E) e-Illinois zisebenza kakhulu ngenxa yezinga lokuphepha elakhelwe emthethweni ukuvikela ukuphambukiswa kwe-cannabis kusuka kwistaketha lokunikezela, noma ukuphanga imali esetshenziselwa ibhizinisi labadala kuphela le-cannabis.
Ukuhlanganisa isicelo se-Illinois Dispensary noma i-Craft grow
Abaluleki bazokusiza ukuthi uhlanganise wakho isicelo selayisense se-cannabis, uhlelo lwebhizinisi, amasu wezezimali, amasu wokuphepha, amasu wokulingana kwezenhlalo, nezinye izinto eziningi. Ukufaka isicelo kuzofana nalokho okwaziwa ngekhulu lama-20 njenge- “Fonibhuku.” Isisho sisho ukuthi ukugcwala kwamaphepha kusuka kuhlelo lokusebenza lokuthola amaphuzu aphezulu kuzoba kukhulu, mhlawumbe kumakhulu amakhasi.
Isizathu sobude bohlelo lokusebenza luhlobene nezethembiso ezenziwa yibhizinisi lakho le-cannabis eSifundazweni sase-Illinois (nezwe lakho uma ukwenye indawo) ekusetshenzisweni kwaso. Phezu kokunikezwa kwelayisense yokukhulisa noma yokuhambisa insangu ebhizinisini lakho, khona-ke yonke imigomo nemibandela nezethembiso eziphathelene nebhizinisi lakho le-cannabis owenze isicelo empeleni ziba yizidingo zokusebenza kwebhizinisi lakho!
Uhlelo lakho lokusebenza lidinga izinqubomgomo zokuqeqesha abasebenzi, izinhlelo zokufinyelela emphakathini, ukwakhiwa kwezokuphepha nezinqubomgomo, imisebenzi yenkampani eyinkimbinkimbi, ubunikazi nezinkontileka zezezimali, nezinhlelo ezibalulekile zokugcina amarekhodi nezinqubo ezisetshenziselwa ukukhulisa noma ukuthengisa insangube yabantu abadala. Alikho elinye ibhizinisi elinokuhlela kwangaphambili okungaka kokunikezwa ilayisense lokuvula iminyango yalo.
Uma uke wezwa noma yimuphi umnikazi webhizinisi ekhononda ngemithetho ebusayo ngokweqile, buza ukuthi ngabe bakwibhizinisi le-cannabis.
Inqubo yokufaka isicelo ingabiza amashumi ezinkulungwane zamaRandi futhi izocaciswa ngokuphelele ngezansi. Into ebalulekile ibhizinisi lakho elingayenza lapho uthatha ubungozi bokufaka isicelo selayisense layo okungenani ukuthenga isicelo esihle. I-Illinois inezihlalo ezimbalwa kakhulu ezivulelwe igagasi lokuqala lomkhakha. Mhlawumbe uzokwenza wave wokuqala, noma owesibili, noma owesithathu.
Uma i-Illinois ifana neColorado inani lamalayisense ama-dispensaries kanye nezikebhe likhula lizodinga ukuphindwe kabili kathathu ngaphezulu kokunyuka okusemthethweni okusemthethweni, okusho ukuthi abantu abanjengawe kuzodingeka ukuthi baqhubeke nokunxusa uMbuso ukuthi ubuyekeze futhi uguqule umthetho wabadlali abaningi .
Uhlelo lwebhizinisi leCannabis (Ithimba)
Ubani opharetha wakho? Njengoba kungenzeka ukuthi ungizwile mangikusho njalo ngeCannabis Legalization News (Lwesithathu @ 2 pm CST), imboni ye-cannabis ngumdlalo weqembu - kunezindlela eziningi lapho inkampani yakho ingangezela noma ikhiphe inani lesitshalo. Lapho ubhala uhlelo lwakho lwebhizinisi, sebenzisa lesi simo sethimba lapho uhlanganisa: isiko lakho, ukhiye wakho wezomthetho, intela, ukuphepha, kanye nabeluleki bokusebenza, abatshalizimali bakho, kanye namakhasimende akho.
I-Illinois ingeza imibimbi emisha ezinhlelweni zebhizinisi le-cannabis zakwamanye amazwe asetshenziswa abadala - ukulingana kwezenhlalo. Ungasebenzisa izinhloso zokulingana kwezenhlalo ukuvula imboni ye-cannabis kulabo aba nomthelela omubi kakhulu yimithetho yezidakamizwa yeminyaka engama-80 edlule. Mhlawumbe inkampani yakho ye-cannabis izokwenza uhlelo lokuqasha abafakizicelo abasebenza ngokugcwele kweze-10 ukuze ibhizinisi lakho laziqhenya ngokulekelela ukufeza izinhloso zombuso emthethweni walo omusha wokusebenzisa abantu abadala.
Vele, uhlelo lwebhizinisi kufanele lube nemali engokwendabuko kanye nokuqagelwa kwezindleko, nomuntu ohlela ukuhlela ngokwezezimali noma i-CPA enezitolo ezedlule, futhi ngethemba lokuthi i-cannabis, isipiliyoni sizothola inkampani yakho izibalo ezithembeke kakhulu. Amapulani webhizinisi le-canabis, ngokungafani nezinhlelo zebhizinisi le-van-vanilla, ngokuvamile kudingeka abhekane nezici zebhizinisi ezivela ngokuhambisana nomthetho. Isibonelo, uzoba nezindleko zokuhambisana ukuze uqinisekise ukuthi imisebenzi yakho ihambisana nemithetho emisha nokuvela ekusebenzeni kwayo, nokuthi leyo mininingwane ingabhekiswa kanjani yisoftware noma ngemithombo yabasebenzi ingachazwa kabanzi.
Abameli bethu be-cannabis bacabanga ukuthi kungumthetho omuhle wesithupha ukubheka ukuthi uMbuso uzithwebula kanjani izicelo ama-cannabis dispensary noma ama-craft grow licence futhi ukhulume nesici ngasinye sazo ngqo lapho uphendula yonke into edingwa uhlelo, ngezinhlelo ezinemininingwane nezincazelo zokuthi kungani ibhizinisi lakho lingumgqatswa ofanele womsebenzi wokuhlanza izikebhe we-cannabis wobuciko noma we-dispensary.
Uhlelo Lokuphepha lweCannabis Dispensary noma i-Craft grow
Ezokuphepha azisho nje ukuthi nomuntu oziphethe kabi ngesibhamu. Ezokuphepha zihlanganisa ubuchwepheshe, ukwakheka kwesakhiwo, nokubukelwa komthetho kwezindlela ezinhle kakhulu zokuthumela uhlelo ukuthi uma kukhona okungahambi kahle, ubani owenze, lapho sekwenziwe, nokuthi kwenzekeni ngempela konke kuthathwe encazelweni ephezulu, kwaphrintwa, futhi kwanikezwa ngokushesha emthethweni Iziphathimandla.
Ezokuphepha zakhiwe futhi zibe yindawo yakho yangempela ekubumbeni kwayo, ukugeleza kwesipiliyoni kwamakhasimende, iminyango, amakhamera, izibani zesitaki, izinto zokwakha, nezinqubomgomo nezinqubo zokuqeqesha zabasebenzi. Isici secebo lokuphepha sohlelo lwakho lokusebenza sibalwa amaphuzu amaningi. Amabhizinisi e-canabis abiza kakhulu ukuwavula, kepha izindleko zokuqala zihlanganisa uhlelo lokuphepha olufanele ukuze luhlangabezane nokwamukelwa koMbuso wakho kanye nenqaku eliphezulu kakhulu.
Qopha Ukugcina Uhlelo Ukuvikela Ukuphambukiswa kwe-Cannabis noma Cash
Izinkampani eziningi zine-software yokuphathelene evela ngaphambi kokuba i-Illinois ibe yisimo se-cannabis sezokwelapha. Lawa ngamabhizinisi ahlanganayo atshala njenge-cannabis kuba ibhizinisi elisemthethweni. Iyiphi isoftware ozoyisebenzisa ukulandela ukunikezwa kwakho kanye nokuthengisa komkhiqizo kuzoncika kumeluleki owukhethile. Awufuni uhlelo lwakho lwePoint of sale (POS) lube yangempela, kahle, i-POS.
Uma uhlelo lwakho lwebhizinisi lubandakanya ukuthuthukiswa kobuchwepheshe obunjalo ezinhlelweni zayo zeminyaka emihlanu zokwenza ukusakazwa kwemali engenayo ngokuthengisa amalayisense ngalokho eyakha, kufanele ungishayele ngaphandle kokuthi ucabanga ukuwenza ku-C #. Ngemuva kwalokho ungaqasha omunye umuntu noma unikeze isizathu esinemininingwane yokukhetha kwakho lolo limi.
Wena nezinhlelo zokuqeqesha zabasebenzi nezinqubomgomo kufanele futhi ube nezindlela ezinhle kakhulu zokunikeza irekhodi elilungile le-cannabis yakho. Lezi zinqubo kufanele zilandelwe, futhi zifaka nokuqeqeshwa nganoma iyiphi isoftware inkampani yakho enqume ukuhamba nayo ukusiza ukulandelela ukusungula kwayo nokuthengisa. Ukujwayelana nezinhlelo zakho kubalulekile ukuvikela insangu ukuthi ingaphambukiswa kuthengi lokuhlinzekwayo, noma ukuya kubi ngokuthatha isikhala eshalofini ngomkhiqizo obekumele ngabe kuncishisiwe ngokushesha.
Amandla Wezezimali Okuklama, Ukwakha nokuSebenza kwebhizinisi leCannabis
Uhlelo lokusebenza lokuthola ilayisense lakho lokukhulisa noma lokuhambisa insangu lubandakanya ukuklama okuningi nezinhlelo zesikhungo sakho mhlawumbe nokupakishwa komkhiqizo walo kanye nokulebula. Abaqambi babaluleke kakhulu kumfanekiso futhi babheke ukuthi bangawudlulisela umkhiqizo wakho omusha we-cannabis. Ngakho-ke ukubenza baklame ukwakheka kwemiklamo yezakhiwo zakho, noma ukufakwa komkhiqizo ngeke kushibhile. Kepha uma isicelo sakho siphumelela, khona-ke kuba yimbi nangokwengeziwe ngoba manje ukwakheka kwamakhemikhali kudingeka kwakhiwe futhi kuqashwe.
Ngokufinyelela noma ngaphandle kokuthola imali mboleko kanye nezibonelelo ezitholakalayo "kubafakizicelo abafanelekile kwezenhlalo," wonke amabhizinisi anelayisensi ye-cannabis adinga ukukhombisa amandla abo ezezimali ukulandela ngemibhalo yabo bese ebenza babe ngokoqobo. Lokho kubiza kucacile futhi kwehlukile kumkhiqizo wakho othile, ukwakhiwa kwawo, nendawo okuthengiswa kuyo izindlu nomhlaba.
Ukuthi ibhizinisi lakho le-cannabis libiza kakhulu yini, noma lixhaswe kahle, kufanele ukwazi ukufakazela ukuthi unemali yokuqhuba ngokwakhiwa nokucaciswa kohlelo lwakho lokusebenza, okufaka nokuxhasa imali ekhokhelwa imisebenzi yakho.
Incwajana Yabasebenzi Nezinqubomgomo Zemfundo Efunwa ngu-Illinois Cannabis Law
Izinkampani eziningi zakha imisebenzi yazo yokuqashwa kanye nezincwadi njengoba zikhula ngokuhamba kwesikhathi, kepha amabhizinisi e-cannabis kufanele abe nawo endaweni ngaphambi kokuvula iminyango yawo.
Ukuqeqeshwa kwabasebenzi bakho be-cannabis kungenye yezinyathelo zombili zokubeka umkhiqizo wakho ukuze uthole isipiliyoni samakhasimende, kepha futhi kudonsela ezinqubweni zakho zokuphepha ngokuzijwayeza ukufundisa ukubona ulimi lomzimba lomuntu nezenzo zakhe ukukhumbula imininingwane ethile uma kwenzeka noma yini okungahambi kahle.
Ukuqhubeka kwemfundo nokuqeqeshwa kwabasebenzi kungabhekana nezinqubomgomo zokunciphisa nokuqaphela ukweba, futhi kugcine abasebenzi namakhasimende ephephile uma kwenzeka kuba ukuphanga.
Kuyiqiniso, abafohli bezimali kufanele babe nolwazi lembali nokukhishwa kwalo, amaphrofayela we-terpenoid, nama-worins ukuze bakwazi ukweluleka abathengi maqondana nokuthi hlobo luni lwesipiliyoni abahlose ukuluthola ku-cannabis.
Izinqubomgomo zakho zokuqeqesha abasebenzi zingakusiza ugcine amakhasimende akho ejabule, abalawula eMazweni bajabule, futhi ibhizinisi lakho liphephile.
I-Community Engagement / Uhlelo Lokulingana Komphakathi Lokufeza Izinjongo ze-Illinois Cannabis Law
Ngenkathi awamaphuzu amaningi abhekiselwe ngokuthe ngqo ekufinyeleleni umphakathi, futhi kwezinye izikhathi amaphuzu amane abe amabhonasi uma kwenzeka izibopho - okusho ukuthi kusamele ukwenze. Uma ubopha futhi ungafaki, kepha omunye umfakisicelo wenze, inhlanhla enkulu!
Ngabe ibhizinisi lakho le-cannabis lenzani ukubuyisa? Kunezinto eziningi ongazenza ukufundisa abantu, noma ukusiza labo abalinyazwe ngumonakalo odalwe yimpi yezidakamizwa, noma omunye umuntu wesifazane, omncane, umakadebona noma iqembu elikhubazekile.
Hlinzeka ngoxhaso ngemali yalolu hlelo lokuzibandakanya kwisabelomali sakho sokusebenza kwebhizinisi, ngoba kufanele kube yindleko eqhubekayo inkampani yakho eqhubeka ukuyenza ukucebisa umphakathi owenzayo.
Izindleko zabaSebenzi bakho beCannabis
Abaphathi bezisebenzi zokugcina kufanele benze ibhizinisi liqhubeke kahle futhi lihambisane. Kufanele babhekane nabasebenzi, abathengi, abathengisi, abalawuli bombuso, abanikazi bebhizinisi, mhlawumbe ngisho nabatshalizimali. Bafunwa ngenxa yokushoda embonini, kodwa abeluleki balinganisela ukuthi ngokwezindleko, zokuqasha zabasebenzi zonyaka zingangena esigabeni sama-dollar esigidi. Ungathathi izwi lethu ngakho, nansi isithombe esivela ku-COVA ngezindleko.
Izindleko zabaeluleki bakho be-Cannabis Professional Advisors
Kukhona izindleko zokuqala kanye nezindleko eziqhubekayo. Udinga igqwetha, i-accountant, umeluleki kwezokusebenza, futhi kufanele ube nomshuwalense ofanele. Isabelomali sonyaka salawa mabanga emashumini ezinkulungwane zamaRandi.
Izindleko Zokukhuthaza Ibhizinisi Lakho le-Cannabis
Hhayi nje i-SEO, imidiya yokufinyelela emphakathini, ukuklama kanye nama-YouTubes, ungaxhasa ngezimali zomphakathi ukufinyelela umlando wakho wokwakha umkhiqizo wakho. Esikuthandayo kakhulu ukuxhasa amasemina wokuchithwa nokwanda kwemisebenzi ngokubambisana nezinhlangano zamabha wasendaweni, osopolitiki, nezinkampani ze-cannabis. Khumbula ukwenza isabelomali salezi zinto ezinhlelweni zakho bese uzibeka ngokwengeziwe ngaphandle komncintiswano wakho.
Isifinyezo Sezindleko Zokufaka Imakethe Yezomthetho ZaseCanabis e-Illinois
Manje manje uyaqonda ukuthi kungani sithe kungaba ngokwesilinganiso cishe ama- $ 500,000 ukuvula i-cannabis dispensary e-Illinois. Asizange ngempela singene kuzo zonke izindleko zemishini yezikebhe ezikhulayo ezingakhuphuka ngenxa yemishini kanye ne-HVAC ehlukahlukene, kanye nezokuphepha, izidingo zokwakhiwa kobuqili zikhula. Lokho okumaphakathi kuzoba cishe amamaki angama- $ 2,000,000 kodwa kuya ngezici ezikhuliswa umuntu ofuna ukuzikhulisa.
Ummeli weCannabis - UTom Howard Usiza iMalijuana Legalization
Umthetho Ovikelekile & Nokulungile Wokuqinisa umthetho - SAFE ACT
Amakhadi Esikweletu Nama-cannabis
I-Illinois Cannabis Banking
Ummeli Wecala Lokulimala KaPeoria
I-Peoria Law Firm
U-Peoria Ummeli Womndeni
UPeoria Ummeli Wokufuduka
ICannabis Regulation kanye noMthetho Wentela
Ilayisense le-Craft grow
Ilayisense Ye-canannens Dispensary License
Isicelo sePennsylvania Grower
Ungaqala Kanjani Ukukhula Kwezomthetho Op
by Lauryn | Jul 6, 2020 | Izindaba ze-Canannis Legalization, Ama-cannabis ama-cannas ama-Dispensaries kanye ne-Grows Vigland Advisors, Ungaqala Kanjani Ukukhula Kwezomthetho Op
Ungakuqala Kanjani Ukukhula Kwezomthetho Ukuqala ukukhula kwe-op esemthethweni kungaba ngumbuzo wokuqala ozibuza wona ukuthi ingabe ngokusemthethweni kufika embusweni wakho. Uma uke watshala isitshalo sakho se-cannabis ekhaya usuvele uyazi ukuthi akuyona ukuhamba epaki. Cabanga nje ukuthatha leso sitshalo esisodwa ...
Ingabe iCannabis isemthethweni e-UK?
by Lauryn | Jul 6, 2020 | I-International Cannabis, insangu izindaba ngamazwe, Ingabe iCannabis isemthethweni e-UK?, Ukuvuselelwa Kwezindaba
Cannabis e-United Kingdom Ingabe insangu isemthethweni e-UK? I-UK ayinalo uhlelo lwe-insangu yezokwelapha kepha uzomangala (noma mhlawumbe ungazi) ukuthola ukuthi bangaki abantu abayiziguli ezingaphansi kohlelo. U-Elliott Rolfe kanye namaNick Earles avela eMackrell.Solicitors ...
Okudingwa ngabazali ukwazi nge-CBD
by Lauryn | Jun 24, 2020 | Izindaba ze-CBD, IGreen Angel CBD, I-Hemp CBD, Okudingwa ngabazali ukwazi nge-CBD
Okudingwa ngabazali nge-CBD Nakhu abazali okudingeka bazi nge-CBD. I-CBD akuyona nje inkambiso - kungukunyakaza - futhi isizile umphakathi jikelele ukuthi ubone insangu yokukhanya okusha. UKim Barker ovela ku-CKSoul ujoyina ukudingida ukuthi i-CBD imguqula kanjani ezokwelapha ...
Uhlelo no-R3 woxhaso e-Illinois
by Lauryn | Jun 17, 2020 | I-2020 Federal Cannabis Legalization Marijuana Policy Project, Izindaba ze-Canannis Legalization, I-Illinois abadala basebenzisa insangu, I-Illinois Isemthethweni Ukuzijabulisa Ngokungabaza Cannabis Rep. UJean Gordon-Booth Bill 2020, Imali ka-R3 e-Illinois, Ukulingana Komphakathi
Uhlelo kanye nezibonelelo ze-R3 e-Illinois Uhlelo lwe-R3 olunikeza izibonelelo e-Illinois zidalwe njengendlela yokulungisa ezinye zezinto ezingalungile ze-War on Drug. Kusanda kumenyezelwa ukuthi, kusukela ngoMeyi 19, 2020, e-Illinois kwabiwa izigidi ezingama- $ 31.5 emalini yentela ngo-R3 ...
Kungani Inkampani Yakho YeCannabis Idinga Iseluleko Ngaphandle
by david | Jun 16, 2020 | Ancillary Cannabis Amabhizinisi, i-cannabis yasebhange, Uhlelo lwebhizinisi lweCannabis, ICannabis Legalization News Canna Advisors Talk Imboni, Ukunqoba Ilayisense YeCannabis
Imakethe yokuqothula ama-cannabis esemthethweni iyi-web eyinkimbinkimbi yemithetho nemigomo. Le mithetho ingashintshwa kwesinye isikhathi kangangoba ezinye zithi, njengePennsylvania neFlorida, zinenkinga yokusebenzisa izinhlelo zazo zokuthola amalayisense. Mhlawumbe akumangazi ukuthi ezinye ze ...
by Lauryn | Jun 4, 2020 | Ancillary Cannabis Amabhizinisi, Uhlelo Lokuvikelwa Kwesistimu yeCannabis Dispensary, I-Cannabis Dispensary Security System Plan Umbrella Technologies, Abasabalalisi beCannabis NABIS, Izindaba ze-Canannis Legalization, Izithuthi zeCannabis Vehicles NorCal Vans
Izimoto zokuhamba zeCannabis Transport Cannabis ziyadingeka ukuthutha ukheshi, i-cannabis, nezinye izinto ezibalulekile ezindaweni zokugcina izimpahla, ezitolo ezithengisa izinto ezitolo nasemagumbini angasese. I-cannabis transporter i-NorCal Vans isijoyina nathi ngomvakashi ovakashelwe uDustin Robinson ukuxoxa okuhle ...
Ngabe udinga Ummeli weCannabis?
Abameli bethu bebhizinisi le-cannabis nabo bangabanikazi bebhizinisi. Bangakusiza ekuhleleni ibhizinisi lakho noma bakusize ekuvikeleni emithethweni enzima ngokweqile.
Sishayele (309) 740-4033 || e-mail Us tom@collateralbase.com
Ummeli Wezimboni zeCannabis a IStazela yakhelwe iwebhusayithi yeTom Howard yebhizinisi lokubonisana leCannabis Industry Advisor kanye nomkhuba wokusebenza kwezomthetho endaweni yezomthetho Isisekelo Sobumbano.
UMsombuluko: 8:00 am - 4:30 pm
NgoLwesibili: 8:00 am - 4:30 pm
I-Thur: 8:00 am - 4:30 pm
NgoMgqibelo nangeSonto: Kuvaliwe
Imininingwane IStazela,, LLC, 2020 - Imephu Yesayithi - TholaLaw - Justia - Abameli Abaphambili - Ukubuyekeza kwe-Google *** Nesitatimende - AKUKHO lutho ngalolu hlobo oludala INKOLO YOKUZIPHATHA NOMA UKUTHENGA KOMTHETHO
Izimboni zeCannabis & Legalization
Bhalisa futhi uthole okusha embonini ye-cannabis. Kuzoba ngama-imeyili ama-2 ngenyanga konke!